Ekwentị mkpanaka ahụ ọ na-ekpo ọkụ na otu esi edozi ya | Gam akporosis
Kedu ihe kpatara igwe eji ekpo ọkụ na otu esi edozi ya
Ignacio Sala | 21/06/2021 22:00 | Batrị, Nkuzi
Ọ bụ karịa karịa na mbụ ịhụ otú anyị ama heats elu ọtụtụ oge ọkọchị, karịa ka ọ dị na mbụ. Agbanyeghị, kpo oku nke ama anyị anaghị ejikọ ya na oge a n'afọ, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị nsogbu nke oge a nke afọ.
Enwere ọtụtụ ihe na-emetụta kpo oku, ma ọ bụ na ọ bụghị, nke ọdụ anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọta kedu ihe kpatara eji ekpo ọkụ na ọnụ gị na-ata ahụhụ na kedu ka ị ga-esi gboo, M na-agba gị ume ka ị nọgide na-agụ isiokwu na-esonụ.
1 Direct ìhè anyanwụ
2 Ihe gbasara gburugburu ebe obibi
3 Loading ọnụ
4 Egwuregwu na-achọ ihe
5 Na-egwu ọdịnaya multimedia
6 Ihuenyo na ogologo oge
7 Nhazi vidiyo
8 Na-ewere foto na ndekọ vidiyo
9 Nsogbu akụrụngwa
10 Ndabere ngwa
Direct ìhè anyanwụ
Okpomoku abụghị ihe ọ bụla na kọmputa. Ezubere ngwaọrụ elektrọnik niile ka ọ kwụsị ịrụ ọrụ mgbe ha ruru ọnọdụ okpotokpo iji gbochie ngwaọrụ ịrụ ọrụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ bụrụ na ịhapụ ekwentị gị na anyanwụ, ọkachasị n'oge ọkọchị, ọ ga-abụ na, ọ bụghị naanị na ọ na-ere ọkụ, kamakwa na ihuenyo nke ọnụ gị anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ gosi ozi na-agwa anyị oke oke okpomọkụ nke ọnụ.
Anyị kwesịrị izere ka o kwere mee, na-ahapụ anyị ama ke anyanwụ, karịsịa n'oge okpomọkụ na ọbụna n'oge dị mkpirikpi. Ọ bụrụ na ọnụnọ anyị ekpugherela anyanwụ n’anwụ ma ọ naghị arụ ọrụ, anyị kwesịrị ichere ka ọ jụọ oyi maka ịlaghachi na ndụ.
Ihe gbasara gburugburu ebe obibi
Okpomọkụ bụ ihe ọzọ na-eme ka okpomọkụ nke ọdụ anyị na-abawanye. Mgbe ole ihere okpomọkụ karịa 30 degrees, Ọ dị mfe anyị ọnụ na-ata ahụhụ, ọ na-adịghị na-amalite na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ọbụna ma ọ bụrụ na anyị na-adịghị arụ usoro na-achọ ihe niile ike nke akụrụngwa.
N'okwu ndị a, ọ bụrụ na anyị nwere mkpa ịga n'ihu iji ya, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime wepụ ya n'okwu ahụ ma jiri ya na-enweghị ya ruo mgbe anyị achọghị ya ọzọ.
Ka ukwuu ma ọ bụ pere mpe, njedebe niile na-ekpo ọkụ mgbe ha na-akwụ ụgwọ. Otú ọ dị, anyị na-achọpụta na ikpo ọkụ n'oge ọkọchị, karịsịa mgbe anyị na-eji usoro ikuku na-akwụ ụgwọ. Igwe chaja ikuku na-ekpo ọkụ n'oge usoro nkwụ ụgwọ, okpomọkụ a na-ebute site na ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị teta n'ụtụtụ wee hụ otu esi akwụghị ngwaọrụ gị n'ụzọ zuru ezu, ọ bụ n'ihi na ọnụ akwụsịla na-akpaghị aka maka ngafe okpomọkụ si odori isi. N'echiche a, ihe kachasị mma n'oge ọnwa na-ekpo ọkụ bụ iji chaja na eriri.
Egwuregwu na-achọ ihe
Ingkpọ Solitaire na ama gị abụghị otu egwuregwu igwu egwu choro ike nile nke ama anyi. Egwuregwu ndị kachasị achọ, dị ka Fortnite, PUBG, Call of Duty, Asphalt 9 ... bụ egwuregwu ndị na-etinye nhazi ahụ ka ọ rụọ ọrụ kachasị, nke mere na n'oge na-adịghị anya, ha na-akwụsịkarị ikpo ọkụ nke ekwentị anyị.
Ma na mgbakwunye, site n'itinye nhazi ya na nke kachasị, dịkwa ha na-eri oke batrị. Ezigbo azịza maka nsogbu a, n'ezie ọ bụghị. Ọ bụrụ na egwuregwu ndị a masịrị gị, anyị agaghị agwa gị ka ị ghara igwu egwu. Naanị ihe ị ga - eme iji gbochie ya iwe iwe karịa ka ọ kwesịrị abụghị ịnwe ngwaọrụ ị na-akwụ ụgwọ ya ka anyị na-egwu egwu.
Na-egwu ọdịnaya multimedia
Akụkụ a metụtara nke gara aga. Media playback bụ ihe ọzọ nke mmiri na-etinye ọrụ nke nhazi anyị, karịsịa mgbe faịlụ ndị anyị na-egwu abụghị ọdịnaya YouTube (n'ihi koodu ọ na-eji).
Ihuenyo na ogologo oge
Karịsịa, anọ m mgbe niile na-ala azụ iji ekwentị m dịka onye nchọgharị GPS. Abịa n’ịje adreesị, 99% nke oge, amaara m okporo ụzọ dị n’okporo ụzọ, yabụ ana m eji ya naanị mgbe m nọ n’obodo.
Ihuenyo bụ otu n'ime ihe ndị na-eri batrị kachasị na ọnụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe ọzọ n'ime ihe ndị ahụ emetụta okpomọkụ ngwaọrụ. Dị ka o kwere mee, jiri naanị igodo njem mgbe ị nọ n'obodo ebe adreesị ịchọrọ ịga, ọ bụghị n'oge njem njem.
Na-akwụ ụgwọ nke ihuenyo, anyị ga-ịgbakwunye nọgidere na-eji GPS ka ngwa ahụ wee mara oge niile ebe anyị ga-achọta onwe anyị na eserese ngosi ma nye anyị ntuzi ziri ezi iji ruo ebe anyị na-aga.
Ọzọ nke Filiks na-eji ọtụtụ nhazi nke ngwaọrụ anyị yana, ya mere, emetụta ọnọdụ okpomọkụ nke ngwaọrụ ahụ, bụ nhazi vidiyo. Ọ bụrụ na anyị ejiri smartphone dezie vidiyo, ọ bụrụ na ha toro ogologo, njedebe ahụ ga-eme ka ọ kpoo ọkụ.
Mgbe ọ bụla anyị nwere ike, ọ ga-adị mma ka anyị rụọ ọrụ nhazi ndị a nke ọma n'ihu kọmputa. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume n'ihi enweghị ụzọ, anyị nwere ike ichere ka ọnọdụ ikuku dị n'okpuru ogo 30.
Na-ewere foto na ndekọ vidiyo
Ọ bụrụ na anyị amalite ịdekọ vidiyo ogologo ma ọ bụ were ọtụtụ foto na obere oge, njedebe anyị ga-eme ka ọ kpoo ọkụ. Ihe kpatara ya bu ndi ozo processor jiri igwefoto niile mee ya ka ịhazie captures ka gịnwa na programmụ.
Mgbe ọ bụla o kwere omume, anyị kwesịrị mee ka ekwentị anyị zuru ike n’ụdị ọnọdụ a. N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ọ bụ ihe omume pụrụ iche anyị chọrọ ịdebe, ọ nweghị ihe ga-eme ọdụ anyị ma ọ bụrụ na ọ gafee oke obere oge.
Ọ bụghị na m nwere Mania pụrụ iche maka njedebe Asia nke obere aha ama ama, mana dabere na ahụmịhe m, enweela m ike ịchọpụta etu imirikiti ọnụ ọnụ ahịa ndị a si ekpo ọkụ site na ịme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ọ na-aga na ịntanetị, na-elele email ... ọrụ ndị anaghị achọ ike site na ọnụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ahịa Asia site na akara ngosi nke mmadụ ole na ole maara, echegbula, ọ bụ ihe a na-emebu. Dị ka ọnụ overheats, ndụ batrị na-ukwuu belata. Ọ bụrụ na ịnwere ike izere ịzụta ngwaọrụ ndị a n'ọdịniihu, n'agbanyeghị etu ọnụ ha dị, ha ka mma. Enweghị ụzọ ọzọ maka nsogbu a.
Ọ bụrụ na ọnụ gị na-ekpo ọkụ ma ọ nweghị nke nhọrọ dị iche iche m gosiri gị n'elu metụtara njikọ ị na-eme nke ọnụ gị, ị kwesịrị ile anya na ngwa na-agba ọsọ n’okirikiri.
Ọ bụrụ, na mgbakwunye na kpo oku gabigara ókè, ị na-ahụta otu esi eme batrị na-agbapu n'ụzọ pụrụ iche, Ihe niile na-egosi na e nwere ụfọdụ ngwa na ndabere na-akpata nsogbu na ngwaọrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Kedu ihe kpatara igwe eji ekpo ọkụ na otu esi edozi ya
Akwụkwọ ahụaja kachasị mma maka gam akporo gị
Umuaka umuaka 5 kacha mma maka gam akporo